Nhengo dzesangano rinorwira kodzero dzemadzimai re Women of Zimbabwe Arise, kana kuti WOZA, dzaratidzira neMuvhuro padare reparamende dzichiti dzinoda kuti zvakabva muvanhu pakunyorwa kuri kuitwa bumbiro idzva remitemo yenyika, zvichibuditswa.
Nhengo dzeWOZA dzinodarika mazana matatu dzatangira kuratidzira paposvo huru yemuHarare dzakananga kuparamende dzichiimba dzakatakura mapepa ane zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi “Tipei Bumbiro Redu”.
Vanhu ava vasiya vamwaya mapepa pamusuwo wedare reparamende anga achikurudzira kuti zvakabuda mukubvunzwa kwakaitwa veruzhinji nekomiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCopac zvibuditswe pachena.
Mukuru weWOZA, Amai Jenni Williams, vati nhengo dzesangano ravo dzichanogara muparamende kana Copac ikaramba ichiita zvekutamba nechirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva.
Izvi zvatsinhirwa naAmai Clarence Mafa avo vanga vari mumwe wevaratidziri ava.
Amai Williams vati sangano ravo riri kuda kuti pfungwa dzeveruzhinji dzibude sezvadziri kwete zvekuti mapato ari muhurumende aswere achitatsurana kuti ndezvipi zvinofanirwa kana kuti kupinda kana kurega mubumbiro riri kunyorwa patsva iri.
Vatiwo sesangano, mubumbiro remitemo hamufaniri kuve nemutungamiri wenyika anodarika makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa.
Mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, vave nemakore makumi masere nemasere. VaMugabe vari kuti vanoda kukwikwidza pachaitwa sarudzo munyika.
Varatidziri ava vazodzingwa nemapurisa padare reparamende apa mushure mekuratidzira kwemaminitsi anokwana gumi vari panze pedare iri.
Asi mapurisa haana waarova sezvaanosiwanzoita pose panoratidzirwa nevanhu paparamende.
Mune imwewo nyaya, magweta ari kumirira nhengo dzeMDC-T makumi maviri nepfumbamwe dziri kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa, Va Petros Mutedza, mumusha we Glen View gore rapera, akumbira dare repamusoro mvumo yekupikisa kunyima kwarakaita nhengo idzi mukana wekubhadhara mari yechibatiso uku nyaya ichienderera mberi nekutongwa.
Rimwe remagweta evasungwa ava, Amai Beatrice Mtetwa, vati vanoda kuti dare repamusorosoro riongorore kuti vasungwa ava havakodzere here kupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi, Va Edmore Nyazamba, vapikisa chikumbiro ichi vachiti dare repamusoro harina charakakanganisa mumutongo waro sezvo vasungwa ava vasina kupa humbowo kudare hunoratidza kuti havanei nemhosva yavari kupomerwa.
Mutongi wedare, VaChinembiri Bhunu, vati vachatura mutongo wavo munguva yavasina kutara.
Zvichakadai, dare repamusoro rakatarisirwa kuenda kubhawa rekwa Munyarari riri mumusha weGlen View neChipiri kunove ndiko kwakaitikira nyaya iyi kuti rinyatsonzwisisa maitikiro akaita zvinhu riri panzvimbo iyi.